Inkumba yamanzi amatsha okanye anetyuwa kancinci: iNeritina Natalensis | Ngeentlanzi
La UNeritina Natalensis, Yiyo iintlobo zeenkumba amanzi amatsha, okanye amanzi amtyuba. Ubuncinci ubungakanani obuphakathi kweesentimitha ezi-2 ukuya kwezi-3, kwaye njengezinye iinkumba kusapho lwazo ezihlala kumanzi anetyuwa, ine-operculum. Igobolondo lolu hlobo lwenkumba linombala o-orenji kakhulu ngombala, kwaye inee-striations ezimileyo kwiithoni ezimnyama ezinje ngombala omnyama nomdaka.
Okwangoku, singafumana uhlobo lwenkumba kule ntsapho inye, eneentlobo kwiqokobhe layo elinemigca engqindilili, okanye ecolekileyo neninzi, okanye ngaphandle komtya, oxabiso layo lokuhombisa nezoqoqosho lingaphezulu kancinane kolo lweentlobo zasendle . Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba le nkumba yeyosapho lwe ikrisiti Yiyo loo nto amalungu ayo abizwa ngokuba zii-neritines okanye i-neritas.
Este Inkumba yamanzi amatsha, Inzalelwane yelizwekazi laseAfrika, apho inokufumaneka kumazwe anjengeKenya, iMozambiki, iSomalia, iTanzania, okanye uMzantsi Afrika. Nangona kunjalo, abanye bacinga ukuba kukho inkumba ifana ne-morphology yayo kwaye bahlala kumazwe ezwekazi lase-Asia, njenge-India, nangona ingekabikho idatha yokuqinisekisa ukukrokra.
Ngokubanzi this uhlobo lwenkumba, Iyaxatyiswa ngama-aquarists akhangela inkumba yokutya i-algae ukuphelisa inambuzane ethile kwi-aquariums zamanzi amatsha. Ukugcina olu hlobo lwenkumba kulula, kufuneka ubonelele ngeemeko ezifanelekileyo kunye neeparameter zamanzi eziyimfuneko, ukongeza kukutya okumnandi kakhulu ukuzigcina zikwimeko efanelekileyo. Umzekelo, ungabondla nge-algae, nge-pasta eyenziwe ekhaya eyenziwe ngemifuno ebilisiweyo, iiporridges, ukutya okubandayo, phakathi kwabanye.
Imvelaphi UNeritin Natalensis
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Inkumba yamanzi amatsha